Uru nnyocha nke ịkwanyere flooring-News-Topflor China ejedebeghị
Echiche:50 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-07-13 Mmalite: Saịtị
Site na mmepe siri ike nke ahịa ụlọ PVC na ịrị elu nke ọrụ injinia ụlọ dị iche iche, ndị ahịa amatakwala PVC ụlọ. Ya mere, olee uru ya?
1. Ntughari gburugburu ebe obibi
Plastic flooring bụ ugbu a bụ naanị ihe eji emegharị emegharị na ihe ịchọ mma ala, yana ọ na-ezutekwa ihe ndị achọrọ maka mmepe na-aga n'ihu n'oge a. Arụ ọrụ ahụ siri ike nke ọma ma ọ gaghị enwe ntụzi n'ihi ihu igwe mmiri, ma ọ bụ gbawara n'ihi ihu igwe.
2. Igwe mmega ahụ n’ahu
Igwe na-ekpo ọkụ nke ala plastik dị mma, na ikpo ọkụ na-adịwanye nro, ọnụọgụ nke mgbasawanye ọkụ dị obere ma kwụsie ike. Na Europe na United States, ebe a na-eji kpo oku ala ebe niile, ụlọ plastik bụ nhọrọ mbụ, nke dabara adaba maka iji ụlọ, ọkachasị na ebe oyi.
3. Ọtụtụ usoro
Enwere ọtụtụ usoro nhọrọ, dị ka ụkpụrụ kapeeti, ụkpụrụ okwute, ụkpụrụ ala osisi, wdg, ọbụnakwa enwere ike ịhazi ya dịka mkpa ndị ọrụ si dị. Ahịrị ndị ahụ bụ ndị ezi uche dị na ha ma nwee ọmarịcha mma, nwere ngwa ndị nwere agba na ibe eji achọ mma, nke nwere ike ijikọta iji mepụta ọmarịcha mma.
4. Njirimara antibacterial
Eji ọgwụgwọ pụrụ iche mee ka elu ala plastik ahụ rụọ, ụlọ elu dị elu ga-agbakwunyekwa ihe na-emegide nje. Nwere ike igbu ọtụtụ nje ma gbochie mmeputakwa nke nje.
5. Waterproof na mmiri àmà
Ebe ọ bụ na ihe bụ isi nke ala plastik bụ resin vinyl, ọ nweghị njikọ maka mmiri, ya mere ọ bụ n'ụzọ ebumpụta ụwa anaghị atụ egwu mmiri, ọ bụrụhaala na ala emighị ala ruo ogologo oge, ọ gaghị emebi; na ọ nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie mildew kpatara site na nnukwu iru mmiri.
6. Super mgbochi skid
Uwe na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide n'elu ala plastik nwere mmetụta na-enweghị mmịpụta. Ọ dịghị mfe ịda n'okpuru ọnọdụ mmiri n'elu ala. Ihe ka mmiri gbakọbara, ọ ka mma ka ọ bụrụ ihe mgbochi. Ya mere, a na-ejikarị ya eme ihe n’ebe ndị nwere nnukwu nchekwa ọha, dịka ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, na ọdụ ụgbọ oloko.
7. Super eyi na-eguzogide ọgwụ
The plastic n'ala nwere pụrụ iche transperent eyi na-eguzogide oyi akwa esichara site elu technology. Nnukwu akwa na-eguzogide ọgwụ na ọgwụgwọ pụrụ iche pụrụ iche na-ekwe nkwa akwa mkpuchi nke ihe ala. Okpukpo na ogo nke akwa mkpuchi na-ekpebi ndụ ọrụ. Nsonaazụ ule a gosipụtara na-egosi na enwere ike iji ala nke akwa 0.55mm akwa akwa maka ihe karịrị afọ 10 n'okpuru ọnọdụ nkịtị, yana akwa akwa akwa nke 0.7mm zuru ezu maka ihe karịrị afọ 15, yabụ Ọ dị oke ike na iyi- eguzogide.
8. Akwa ekwedo na ibu mmetụta na-eguzogide
Ala plastik nwere ọdịdị dị nro, ya mere ọ nwere ezigbo elasticity. Ọbụna n'okpuru mmetụta nke ihe dị arọ, ọ nwere mgbatị dị mma nke ọma, ala a kpokọtara nwere ezigbo mgbanwe. A na-akpọ ụkwụ ụkwụ ya dị mma "ọla edo dị nro". Ala plastik nwere ike belata mbibi nke ala na ahụ mmadụ ma nwee ike gbasaa mmetụta dị na ụkwụ, ya mere ọ na-ahụkarị na mpaghara egwuregwu.
9. Ọkụ ọkụ
Nkọwa ọkụ ọkụ nke ala plastik nwere ike iru ọkwa B1, na arụmọrụ ọkụ na-esote nke abụọ. E jiri ya tụnyere ala nkịtị, ala rọba bụ ire ọkụ; na anwụrụ ọkụ nke ala dị elu na-emepụta mgbe ọkụ na-ere ya ga-emerụ ahụ mmadụ ahụ ma ọ gaghị emepụta gas na-egbu egbu ma na-emerụ ahụ nke na-eme ka iku ume.
10. absorda ụda na mbelata mkpọtụ
Ngwongwo plastik nwere mmetụta na-ada ụda nke na-enweghị atụ na ihe ala ala, ruo decibel 20, yabụ ọ ga-abụ ahịa dị mkpa maka plastik plastik na gburugburu ndị chọrọ ịdị jụụ, dịka ọba akwụkwọ, ụlọ nzukọ nkuzi, na ụlọ ihe nkiri.
11. Ntinye ngwa ngwa na owuwu
Ọ bụrụ na mmetụta nkwonkwo dị mma, mana ihe owuwu ahụ dị mgbagwoju anya ma sie ike, ọ gaghị arụ ọrụ. Ntinye na iwu nke ala plastik di oke oso. Ọ naghị achọ ngwa agha simenti a na-ejikarị. Gburugburu ya nwere ezigbo ntọala ntọala naanị ka ọ jikọtara ya na ala ụlọ nwere gburugburu ebe obibi pụrụ iche.
12. Mfe mmezi
Enwere ike ịsị na mmezi nke plastik dị mfe ma dị mfe, na unyi na ngwongwo zuru ezu nwere ike iji nhicha na nkụcha hichaa ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-enwe mmetụta na-adịgide adịgide ma na-egbu maramara nke ala, naanị ị ga-eji waksị oge niile maka mmezi, oge mmezi dịkwa ala karịa ala ndị ọzọ.
Ihe nzuzo dị n’okpuru ụkwụ ị ga-amata iji mụta ịgba egwu